Iindaba-Udidi oluPhambili lwe-Iron Art
Udidi oluPhambili lwe-Iron Art
UbuGcisa bentsimbi 3
Ubugcisa be-iron, xa sithetha ngokubanzi, bubugcisa obutshintsha izinto ezirhabaxa ezenziwe ngentsimbi (ebizwa ngokuba zii-ironware) zibe zizinto zobugcisa. Nangona kunjalo, ubugcisa bentsimbi abuhlukanga kwiintsimbi eziqhelekileyo.
Ingcamango yobugcisa bentsimbi kwiminyaka emininzi eyadlulayo, ukususela kwi-Iron Age, abantu baqala ukucubungula iimveliso zentsimbi. Abanye abantu baya kuxhomekeka kobu bugcisa ukuze bafumane imali ukuze baphile. Sibabiza ngokuba ngabakhandi beentsimbi. Abo basebenza ngentsimbi, okanye abakhandi bentsimbi, baya kulungisa imathiriyeli yentsimbi eqhelekileyo kwizinto ezahlukeneyo, njengeepani zentsimbi, amacephe entsimbi kunye neemela zasekhitshini ezisetyenziswa kubomi bethu bemihla ngemihla ekuphekeni kwakunye nezikere nezikhonkwane ezisetyenziswa kubomi bemihla ngemihla. Kwanamakrele nemikhonto esetyenziswa emfazweni inokufaneleka njengentsimbi. Nangona kukho umahluko omncinane phakathi kwe-ironware kunye ne-iron art, iimveliso ezingentla azikwazi ukubizwa ngokuba yi-iron art.
Kamva, ngokuhambela phambili kwenzululwazi nobuchwepheshe, iimveliso zentsimbi zihlala zihlaziywa kwaye zikhazimliswa. Azipheleli nje ekubeni zisebenziseke ngakumbi, ziye zenza inkqubela enkulu kwinkangeleko. Isenokubizwa ngokuba ngumsebenzi wobugcisa ozalwa ngobugcisa bentsimbi. Ukuhlelwa kweemveliso zobugcisa zentsimbi kusekelwe kwizinto eziluhlaza kunye neendlela zokucubungula.
Ubuchwephesha bentsimbi bunokwahlulwa ngokweendidi ezi-3: ubugcisa bentsimbi yeentyatyambo ezisicaba, ubugcisa bentsimbi ekhandiweyo kunye nobugcisa bentsimbi.
I-caracteristic enye yobugcisa bentsimbi yeentyatyambo zentyatyambo yinto nje yokuba yenziwe ngesandla. Ngokuphathelele ubugcisa bentsimbi esetyenzisiweyo, sichaza kwaye sibizwe ngoko naziphi na iimveliso zentsimbi ezenziwe kwi-low-carbon steel type material kunye nepateni yayo yenziwe ngokupheleleyo ngeendlela zoomatshini - ezibunjwe ngokubethelwa. Malunga nobugcisa bentsimbi, i-caracteristic yayo ephambili yimathiriyeli. Eyona nto iphambili yobugcisa bentsimbi yintsimbi enombala ongwevu. Umzobo wentsimbi yokuphosa unokuba neepateni ezininzi kunye neemilo kwaye ubukhulu becala busetyenziselwa ukuhombisa.
Loluphi udidi oluphambili phakathi kwezi ndidi zi-3 zingentla zobugcisa bentsimbi?
Eyona nto isetyenziswayo yintsimbi eyenziweyo. Iimveliso zentsimbi zenziwe ngokubanzi ngokungunda, ngoko ke inkangeleko irhabaxa kodwa ngexabiso elifanelekileyo nangona kulula kakhulu ukufumana ibala.
I imveliso yobugcisa bentsimbi
Ukuveliswa kobugcisa bentsimbi kufuna amanyathelo ambalwa. Inyathelo lokuqala lokuvelisa ubugcisa bentsimbi ngokubanzi libandakanya ukuqokelela izinto ezikrwada kunye nokuzijonga. Izinto eziphambili eziza kusetyenziswa ziquka intsimbi eyisicaba, intsimbi yesikwere, intonga ye-welding kunye nepeyinti. Nika ingqalelo xa uqokelela imathiriyeli ekrwada; kufuneka ilandele iimpawu ezithile ezisemgangathweni zamazwe ngamazwe. Emva kokuba izinto eziluhlaza zilungile, inkqubo inokuqalisa ukulandela amanyathelo athile. Umyili oyingcali unokuzoba isampuli esebenzisa ikhompyuter hayi ngomzobo olula ephepheni kuba uninzi lweefektri zamkele imodeli yekhompyuter yeemodeli zeemveliso zentsimbi. Emva kokuyila imodeli yesoftware, ingcibi inokutshintsha imathiriyeli ekrwada ibe yimveliso yentsimbi yokugqibela ngokulandela ipateni kwimodeli yetemplate yekhompyuter. Ukuba imodeli nayiphi na imizobo yentsimbi inamalungu ahlukeneyo, aya kudityaniswa nge-welding, emva koko anikezelwe kubasebenzi abakhethekileyo kunyango lomphezulu kwaye ekugqibeleni ipeyintiwe ngepeyinti ephezulu ye-anti-rust. Ngokuqinisekileyo, imveliso egqityiweyo kufuneka inikezelwe kumhloli ukuze ahlolwe.
Ubugcisa bentsimbi bubuchule kodwa bukwanobuchule. Ukuphuhliswa kobugcisa bentsimbi kulandele inkqubela phambili eqhubekayo yesayensi kunye nobuchwepheshe. Iimveliso zentsimbi eziveliswa ngabantu ngeentsuku zokuqala zazisebenza kuphela, kodwa ubugcisa bentsimbi obuveliswa ngabantu banamhlanje bunokufaneleka njengobugcisa obucocekileyo bokuhlobisa. Ke ngoko, ithemba lophuhliso lobugcisa bentsimbi lisenethemba kwaye likwinkqubela phambili eqhubekayo.
Ixesha lokuposa: Nov-29-2020
isibane esikhokeleyo, izibane zelanga, Metal Garden Decoration, UbuGcisa beGadi banamhlanje, ilanteni yokuhombisa, Garden Decor Metal,